Shaxda shirqoollada iyo Shabaqa Shabaab – Bashiir M. Xersi
Shaxda shirqoollada iyo Shabaqa Shabaab
Shaxda shirqoollada iyo Shabaqa Shabaab!
Murti ayaa dhahaysa: “Aqool xumo abaar ka daran” mid kale waxay leedahay dadka saddax ayaa ugu xun: “Tiraab xume, Talo xume iyo Tab xume” tu kale waxay leedahay ninna waxaa laga sheegay inuu yiri: “Maantoon Talo haayo Tabar ma hayo, maalintaan Tabar haayana talo ma hayn!” Cabdi Malow na waxaa laga sheegay inuu yiri:
Qaraxyada dhacay ee lagu hoobtay ee reebay uur ku taallo iyo urug aan go’ayn waxaa ka mida: qaraxii lagu qaarijiyey Cumar Xaashi Aadan oo ahaa wasiirka Aminiga qaranka, Danjire C/kariin Faarax “Laqanyo”iyo xubno kale, qaraxaa wuxuu dhacay bartamihii sanadkii 2009-kii, wuxuuna ka dhacay Hotel Madina, oo ku yaal magaalada Baladweyn, aqriste cid dib uga sheekaynaysa ma aragtay? iska daa in dadkii gaystay cadaaladda la soo taagee, marka laga reebo heeso baroor diiq ah.
Qaraxii xigay wuxuu dhacay isla dhammaadkii sanaddii 2009-kii gaar ahaan 03-dii bishii December, waxaa isna ku baxay arday ka qalinjabisay Jaamacadda Banaadir, qaybta Caafimaadka, Waxbarashada iyoSayniska, arday kaliya kuma dhiman, ee waxaa ku dhintay wasiirro sida: Wasiirka Caafimaadka Qamar Aadam Cali, Wasiirka Tacliinta Sare Prof. Ibraahim Xasan Caddow, Axmed Cabdullaahi WaayeelWasiirka Waxbarashada, Saleebaan Colaad Rooble Wasiirkii Dhallinyrada iyo Isboortiga, wariyayaal iyo waalidiin.
Anigu aan eedda saaro meesha shabaqu ka jiro, ayna taal shabaagta shirqoolku, dalka dawlad ayuu leeyahyay, madax, masuuliyiin iyo maamul ay hoggaanshaan, ka sokow, waxaa jira xarumo, laamo iyogoobo u xilsaaran ammaanka, waxaaba ka sii daran inay jiraan kuwa ku magacaaban dabagal, ugu yaraan laba wasaaradood ayaa sidoo kale hawshaa ku magacaan iyo guddiga la yiraa: Guddiga amniga qaranka, oo ay hoos yimaadaan dhammaan laamaha amaanka qaabilsan.
Dadku isagoo la yaabban qaraxii National Theatre “Golaha Murtida iyo Madadaalada” qaabka uu dhacay, ayaa waxaa soo yeeray in Abaan duuliyaha Ciidan Qalabka sida Jen. C/kariin Yuusuf Aadan“Dhega Badan” uu ka badbaaday qaarijin lala damac sanaa, yaa soo abaabaulay? Alsabaab, yey kaashatay? Xubno ka tirsan ilaaladiisa gaarka ah, oo waliba Sargaalka qaraabo hoose la ah.
Maarso 09 2012
Previous Previous post: Gardarrada Gaas oo laga wada gilgishay!
Next Next post: Soomaali: is ma dhaanto iyo dhasheed